DEG DEG-Beesha caalamka oo ku dhawaaqday war ka nixiyey Xasan Sh iyo musharixiinta musuq-masuqa wada oo laga joojinayo doorashada+camerado. – Puntland News.net
Home 2017 February 7 Somali News DEG DEG-Beesha caalamka oo ku dhawaaqday war ka nixiyey Xasan Sh iyo musharixiinta musuq-masuqa wada oo laga joojinayo doorashada+camerado.
DEG DEG-Beesha caalamka oo ku dhawaaqday war ka nixiyey Xasan Sh iyo musharixiinta musuq-masuqa wada oo laga joojinayo doorashada+camerado.
Beesha Caalamka, oo ay QM horkacayso waxay Kulan albaabadda u xirnaa la yeesheen Guddiga Doorashadda ee Barlamaanka iyo Guddiga cusub ee Ilaalinta Anshaxa Doorashadda waxayna ka soo saareen Tallaabooyin adag oo ku aadan Musharax kasta oo Madaxweyne ee looga shakiyo inuu ku lug leeyahay Cod-iibsasho.
Mas’uuliyiintaasi oo Kulan qaatay dhowr saacadood ku yeeshay Dhismaha QM iyo Midowga Afrika ku leeyihiin Xarunta Xalane ayaa waxa Ajendaha figta sare uga jiray sida wax looga qabanayo Murashixiinta Madaxweyne ee lagu helo musuqa.
Sida laga soo xigtay xubin ka tirsan Guddiga oo joogay Shirkaasi ayaa sheegay in Natiijadda Murasharaxii lagu tuhmo Musuq la burin doono.
Kameerooyinka Qarsoon ee CCTV ayaa lagu rakay goobta lagu codeynayo, si looga ilaaleeyo wax kasta oo musuq ah.
Xubnaha Beesha Calaamiga iyo Labada Guddi waxay kaloo ku heshiiyeen inaan nooc kasta oo Ololeyn ah loo oggolaan doonin goobta Doorashadda.
Xubin ka qeyb galay Shirka maanta ka dhacay Xarunta Xalane waxa uu sheegay inay baarayaan Kiisas dhawaan warbixintooda la soo gaarsiiyey.
One thought on “DEG DEG-Beesha caalamka oo ku dhawaaqday war ka nixiyey Xasan Sh iyo musharixiinta musuq-masuqa wada oo laga joojinayo doorashada+camerado.”
said hashi February 7, 2017 at 2:27 pm · Edit
Wadadaal macquul ah in ragbadan oo musuqa bartay caana ku ah hantida qaranka umada in ay boobaan lagayaabo in tartankooda ku waayan .
Lakin kuwa hada dhaqalihii umada somalia ee caalamku ku taageerey ama dhaqalaha umadu lahayd ee kaabayasha dhaqalaha laga aruuriyay jeebka ku shubtay una sharaxan hada in uu markale ku shubto yaa kajoojinaaya